Avy taiza, natao inona ? karapanondro an-jatony hita tao ambany tetezan’i Tanjombato | NewsMada
Avy taiza, natao inona ? karapanondro an-jatony hita tao ambany tetezan’i Tanjombato
Nisy nanary karampanondro marobe tao ambany tetezan’i Tanjombato, afakomaly. Nahatratra 106 ny isan’ireo karapanondro ireo, niampy fahazoan-alana hamily fiara iray. Nalain’ny olona sary ireo, ary naterina tany amin’ny onjam-peo tsy miankina iray mba hanao antso avo ho an’izay tompony.
Avy taiza, natao inona ? Mandeha avy hatrany ny eritreritry ny olona manodidina ny mety nampiasaina ireto karapanondro ireto. “Olona 106 iza no very karapanondro taiza? Sa hosoka avokoa ireo ary nariana rehefa vita ny nilana azy?”, hoy ny mpanara-baovao.
Efa miakatra ny maripana eo amin’ny raharaha politika, amin’izao fotoana izao, ary ny toe-javatra tahaka izao no mampisy ny ahiahy eo amin’ny olona amin’ny resaka hala-bato. Mampanahy ny olona ihany koa ny filazana fa misy ny fikononkononana fanakorontanana eto an-dRenivohitra. Nisy nahatazana teny Ivandry teny ny fisiana andiana tovolahy nozaraina vola. Mety karamany avy niasa izany, saingy ny fahitan’ny olona izany, efa adikany ho zavatra hafa. Toe-javatra kely mety hampikorontana eto amintsika raha izao ny mitohy.